China HF Solid Sate Welder orinasa sy mpanamboatra | TUBO
Ny fantsom-pandrefesana fantsom-pandrefesana avo lenta ho an'ny vy karbaona, varahina alimika, fantsom-by / fantsom-by fantsom-boaloboka. Ny HFwelder miorina amin'ny fanjakana dia misy ny kabinetra manitsy, kabinetra famoahana inverter, fonosana azo ahitsy 2-D, rafitra fanamainana rano malemy ary kabinetra fiasan'ny foibe.
1.Tsy misy fandotoana, tabataba ambany, tsy misy rano fako ary tsy misy etona mandany. Ny rano mivezivezy dia ampiasaina amin'ny famokarana mba hampangatsiaka, hitsitsiana angovo, hiarovana ny tontolo iainana ary hitsitsiana ny asa.
2. Mety amin'ny sehatra rehetra toy ny fambolena sy ny indostrialy famokarana.
Fitaovana fantsona 3.welded manana kalitao tsara, toe-javatra seam tsara, tsy dia burr, hafainganana haingana, mitahiry angovo sy ny vidiny.
4.Ny kalitaon'ny welding tsara, ny hafainganam-pandeha haingana ary ny fanjifana herinaratra ambany, nampiharina be izy io ary notsongaina.
5.Mariaza fotoana be dia be amin'ny fanodinana vy.
Herin'ny welding KW） Pipe OD (mm) Hateviny (MG) Haingam-pandeha (m / min)
1000 ~ 165 610 6.0 ~ 19,0 ≤30
Previous: Fomba fananganana FFX
Manaraka: Tsipika famokarana vy tsy misy fangarony